Indlu elungele usapho esembindini welali
Indlu encinci ngasemlanjeni embindini wePöls enegadi ebiyelweyo. Amagumbi okulala amabini aneebhedi ezinobukhulu bokumkanikazi, ukuba kuyimfuneko iibhedi / ibhedi eyongezelelweyo yabantwana inokusekwa. Ubuninzi bokuhlala abantu abadala aba-4. Isilwanyana sasekhaya sivumelekile. Ikhitshi enepleyiti eshushu, ifriji, umatshini wokuhlamba izitya.
Indawo yokuhlala ibekwe kwindawo efanelekileyo kwiRed Bull Ring okanye kwiibhafu ezishushu zeAqualux. Ikwalungele indawo yokumisa kwindlela esemazantsi.
Ikofu kunye neti zihlala zibonelelwa. Xa imozulu intle, ungonwabela "ixesha leti" kwigadi yakho. Umatshini wokuhlamba ungasetyenziswa nangaliphi na ixesha. Umnyango unokufikelelwa ngaphandle kwezitebhisi, endlwini kukho amanyathelo ama-3 kuphela ukuya ekhitshini, ngaphandle koko akukho ziphakamileyo zokunqoba.
Le ndlu yakhiwa njenge forge ngenkulungwane ye-10 kwaye ineendonga ezingqindilili.
Cafe L`Angole (20 m ngaphaya isikwere) isuphamakethi 300 m kude, kubakhweli beebhayisikile: ivenkile ibhayisekile kumgama omfutshane kude, kwakunye ekhemesti kunye nogqirha.
Indlu yethu iphakathi kwisikwere kunye nepaki encinci kwindawo ekufutshane. Idama lokuqubha langaphakathi kunye nedama lokuqubha eliphilayo elikumgama ongama-200m.
Ungandifumana ngefowuni okanye nge-imeyile. Isitshixo sikwisefu yesitshixo ekungeneni, ngoko ungangena nangaliphi na ixesha. Kukho indawo yokupaka yoluntu eyaneleyo ejikeleze indlu (isimahla!), Iibhayisekile zinokupakishwa kwishedi yegadi.